Umatshini okrelekrele wombane wabavelisi kunye nababoneleli - China Umatshini wokudlala oMbane oMbane
Iimveliso zethu zichongiwe ngokubanzi kwaye zinokuthenjwa ngabantu kwaye zinokuhlangabezana ngokuqhubekekayo ziguqula iimfuno zezemali nezentlalo zoMbane oBukrelekrele woMbane,,,,, Siyabamkela abathengi abatsha nabadala abavela kuzo zonke iinkalo zobomi ukuba banxibelelane nathi kubudlelwane bamashishini bexesha elizayo kunye nempumelelo efanayo! Ngeteknoloji yethu ekhokelayo ngaxeshanye nomoya wethu wokuyila izinto ezintsha, intsebenziswano, izibonelelo kunye nokukhula, siza kwakha ikamva eliqaqambileyo kunye nefemu yakho ehloniphekileyo yeToyitoyi yoMbane ekrelekrele, Ukuhlangabezana neemfuno zabathengi abathile kwinto nganye inkonzo egqibeleleyo kunye nentengiso ezinzileyo esemgangathweni. Sibamkela ngokufudumeleyo abathengi kwihlabathi liphela ukuba basindwendwele, ngentsebenziswano yethu enamacala amaninzi, kwaye ngokudibeneyo sikhulisa iimarike ezintsha, senza ikamva eliqaqambileyo!
Uthotho lweBhotile yeBhotile yeCat Toy
Π Uthotho Iibhotile zewayini ikati yokudlala yamkela uyilo lwenkunkuma enombonakalo webhotile wewayini kwaye inokujikeleza ngokulula iidigri ezingama-360. Inkqubo yoluvo eyakhelwe-ngaphakathi ekrelekrele iyakuqonda ukuvulwa kweqhosha elinye kunye nokuvala okunengqondo. Umzimba webhotile uyilelwe njengetanki lokugcina ukutya, elinokuvuza ukutya okanye ukutya okulula xa udlala imidlalo. Ukongeza, ukuze ufumane amava amnandi wekati, emva kophando oluphindaphindiweyo kunye nokuvavanya ikati’Uthando lwezinto ezahlukeneyo, ekugqibeleni sagqiba izinto ezintathu ukwanelisa ikati’Ukufuna ukwazi.
Uthotho lweKati yeTray Teaser yokuDlala
Π Uthotho lweKati yeTray Teaser yokuDlalaeneemilo ezahlukeneyo ezithandekayo, zizele luvuyo. Iindidi ezisixhenxe zokuluma kweglue zenza ukuba ikati ingadinwa kukudlala, yanelise ukwazi kwekati. Izitayile ezahlukeneyo kwiveki enye, ubomi bekati abusenasidima.
Izikrufu-Iindlela ezahlukeneyo zokuhlekisa ngekati, azinakuyeka kwaphela
ICactus - Yonke ikati iyaphambana malunga necacti
Ibhulashi lamazinyo - Lilingana nomlomo wekati ukuze amazinyo acoceke kakuhle
Amakhowa-ndenza imali yokondla usapho, uyatya, uyasela kwaye wonwabe
Iphengwini-Iphengwini entle, ayikwazi ukumisa ikati ekudlaleni
Imouse - Iphupha leJERRY, imodi yokuzingela ngemizuzwana
Ithambo leentlanzi-Ukusukela namhlanje, iintlanzi zam ziya kunikwa wena kuphela
Ekrelekrele Rolling Electric Ball
I-Intelligent Rolling Electric Ball ayisiyibhola yombane yokudlala enokuqengqeleka ngaphezulu kweedigri ezingama-360 ngaphandle kokufa, kodwa inokusetyenziswa njengesixhobo sokuhambisa izilwanyana. Umzimba wenziwe ngezinto zokukhusela indalo kwi-ABS, ezingenatyhefu kwaye ezingenabungozi, izilwanyana zasekhaya zingakhotha ngokukhululekileyo, zilume kwaye zikrwembe. I-Intelligent Rolling Electric Ball inemisebenzi yobuqabane obuhlakaniphile, ikati ehlekisayo enesibane esibomvu, ukuvula isitshixo esinye, ukuqengqeleka nokuvuza ukutya, ukuthintela umqobo ngokuzenzekelayo kunye nentsimbi yentsila encinci.
Isiphelo seLaser Cat Cat C031
Isiphelo seLaser Cat Cat C031 siyila intloko kwisitayile sentloko yebhere, eyonyusa umdla wayo. Kwizinto eziphathekayo, sisebenzisa izinto zokutya-eziqinisekisiweyo ze-FDA, ezingenabungozi kunye nobume bendalo. Umzimba wokuncamathela owenziwe ngeebhloko zombala ezahlukileyo nawo uya kuyenza ibe nomtsalane ngakumbi. Zintathu iintlobo zemibala: White & Avocado Green, White & Cherry Blossom Pink, White and Orange.
Ukusebenza, i-Double-End Laser Cat Stick C031 ineendlela zokudlala eziguqukayo. Ekupheleni kwentloko encinci yebhere, inokusetyenziswa njengentsiba lekati elihlekisayo, elilawulwa liqhosha ukwenza intambo irhoxe. Kwelinye icala, kukho elinye iqhosha lokuvula okanye ukucima ukukhanya kwelaser, ukuze abantu bayisebenzise ukudlala nezilwanyana zasekhaya.
Isiphelo seLaser Cat Cat C030
I-Laser-End Laser Cat Stick yinto ehlekisayo yokudlala ikati ngeendlela ezahlukeneyo zokudlala. Xa ingasetyenziswa, ishafti iyonke imalunga ne-20 cm. Ingabekwa ngokulula kwidrowa okanye kwibhokisi yokugcina ngaphandle kokuthatha indawo, okanye inokuphathwa epokothweni yebhegi okanye engxoweni kwaye uphathe nayo. Kukho amacandelo amane eentsika zentsimbi ezifihliweyo kumzimba wentonga, owolula waya kubude obumalunga ne-52 cm, kwaye ungaqala ukudlala nekati. Islingisi seteleskopu ezingama-35 cm silawulwa liqhosha ukuze sandise ubude baso sonke kwaye sinxibelelane nekati ngokuguqukayo. Kuza umgangatho kunye neentsiba ezininzi kunye neebhola ezinobuninzi, ezinokuthi zitshintshwe ngokulula. Ukongeza, kwelinye icala lemveliso, imo yelaser nayo inokuvulwa ngokucofa iqhosha ukwanelisa ikati’Ukuleqa indalo.
Ungayisombulula njani inkxalabo malunga nemeko yekati xa abazali bekati bengekho ekhaya, ngakumbi kwiintsapho ezinekati enye kuphela, yenye yemicimbi esiyiqwalasele ngakumbi kwimveliso yeetoyi zekati yezilwanyana zasekhaya. I-Bear encinci ejikelezayo yeLaser Toy yanceda umnini wekati ukujongana nale ngxaki kakuhle.